Kooxo hubeysan oo qof Shacab ah ku toogtay magaalada Guriceel ee gobolka Galgaduud | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Kooxo hubeysan oo qof Shacab ah ku toogtay magaalada Guriceel ee gobolka...
Kooxo hubeysan oo qof Shacab ah ku toogtay magaalada Guriceel ee gobolka Galgaduud
Galgaduud (Halqaran.com) – Warar naga soo gaaraya magaalada Guriceel ee Gobolka Galgaduud ayaa sheegaya, in halkaasi uu ka dhacay dil loo gaystay nin shacab ah.
Dilkaan oo dhacay duhurnimadii maanta ayaa Koox hubaysan waxa ay dileen nin ka mid ahaay dadka deegaanka, balse aanan ka soo jeedin Magaalada Guriceel.
Dilka qofka shacabka ah ayaa waxaa uu ka dhacay xaafad lagu magacaabo Tuulo Gaban oo ka tirsan degmada Guriceel, waxaana la sheegay in kooxdii ka dambeeyay dilka qofka Shacabka ah ay goobta ka baxsadeen.
Ninka dilka loo gaystay ayaa wuxuu ka soo jeedaa Degmada Balanbal ee Gobolka Galgaduud, waxaana dilkiisa uu salka ku haayaa arrimo ku saleysan aano Qabiil.
Ciidamada ammaanka Degmada Guriceel ayaa lagu soo waramayaa inay wadaan baadigoobka dadkii ka dambeeyay dilka loo gaystay ruuxaasi.
Dilkaan ka dhacay Magaalada Guriceel ayaa wuxuu ku soo aadayaa, iyadoo Magaalada Dhuusamareeb uu ka socdo Shirka dib u heshiisiinta Beelaha dega deeganada Galmudug.